5 vavengi vehukama | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/01/2022 22:46 | Hukama
Hukama hwevakaroora, sezvinoitika nehumwe hukama pakati pevanhu, inogona kuva yakaoma. Zvinogona kuitika kuti zvinhu zvose zvinofamba zvakanaka uye chisungo chinosimbiswa zuva nezuva kana kuti vamwe vavengi vanopinda mumutambo izvo zvishoma nezvishoma zvinokanganisa hukama hwambotaurwa.
Muchinyorwa chinotevera tinotaura nezve zvinowanzoitika kana zvikonzero nei hukama hunogona kupesana uye kuti vanogona kuguma nazvo.
1 Kukurukurirana kwakaipa
2 Kushushikana mupfungwa
3 Kubata pamoyo
4 Kushaikwa kwekuvimba
Kukurukurirana hakugoni kushaikwa mune vakaroorana. sezvo iri mbiru inokosha payakavakirwa. Izvo zvikamu zvakakosha zvevaviri zvinofanirwa kutaura zvavanonzwa nguva dzese uye kana izvi zvikasaitika, zvakajairika kuti kurwa uye kusawirirana kutange nekufamba kwenguva. Zvakanaka kuti kugara zvakanaka kwevakaroorana vagare vakanyarara uye vakasununguka uye kutaura zvaunonzwa.
Imwe yevavengi kune vaviri kutsamira mupfungwa. Hakugoni kuva kuti mufaro womunhu amene unotsamira panguva dzose pamumwe munhu. Kutsamira papfungwa kunoita kuti hukama hune hutano nevaviri huve muchetura. Rudo rwuri muvaviri runofanira kusununguka uye rusina chero rudzi rwezvisungo.
Emotional manipulation ndechimwe chevavengi vakuru vevaviri. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mumwe wemapato ari muukama anobvuma nhevedzano yemhosva kuitira kuti mumwe wake arambe ari pedyo navo. Uku kunyengedza kune hukama hwakananga nekutsamira kwemanzwiro kunoonekwa pamusoro. Hazvigone kushivirirwa mumamiriro ezvinhu chero api zvawo kuti mumwe wemapato evaroorani anoshandisa kudzora manzwiro kuti ave nekutonga kune mumwe munhu.
Kuvimba, pamwe chete nekurukurirano yakanaka, imwe yembiru huru muvaviri. Kusavimba nemumwe munhu kunoita kuti hukama hupere zvishoma nezvishoma. Muzviitiko zvakawanda, kushayikwa kwechivimbo kunooneka nekuda kwemanyepo ayo mumwe wemapato evaviri ava anoshandisa nguva nenguva.
Mune chero vakaroorana, dzimwe godo dzomusikirwo dzinogona kuitika dzisingaise pangozi ukama hwambotaurwa. Dambudziko guru navo nderekuti ivo vanomanikidzira uye pathological godo. Mhando iyi yegodo muvengi mukuru kune chero hukama uye inokonzera kukakavara uye kurwisana kunoparadza.
Muchidimbu, Hapana akataura kuti kushamwaridzana chinhu chiri nyore. Ukama huri pakati pevanhu vaviri umo vanofanira kuramba vachikwasva vachifarira kuti vawane kugara zvakanaka uye mufaro. Pane nhevedzano yezvinhu zvinofanirwa kunge zviripo kuitira kuti hukama hurege kupera simba, sekuremekedza, kuvimbana, kutaurirana kana rudo. Mukupesana, zvinodikanwa kudzivirira vamwe vavengi kuti varege kuoneka sezvo vachigona kukonzera kunetsana kusingabatsire ramangwana rakanaka revaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » 5 vavengi vehukama
Nguo dzekutanga dzauchawana mukutengesa kweMango